पूँजीगत खर्च २० प्रतिशतसम्म पनि पुगेन | गृहपृष्ठ
Home समाचार पूँजीगत खर्च २० प्रतिशतसम्म पनि पुगेन
समाचार 57 views
पूँजीगत खर्च २० प्रतिशतसम्म पनि पुगेन
फागुन २, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा सरकारको पूँजीगत खर्च लक्ष्यको १९ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
चालू आवको फागुन १ गतेसम्ममा पूँजिगत खर्च रू. ६६ अर्ब १९ करोड १७ लाख भएको छ । यो अवधिमा यस्तो खर्चको लक्ष्य रू. ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख थियो ।
देशको राज्य संयन्त्र निर्वाचनमा लाग्नु परेको र मुलुकका विभिन्न भागमा गएको प्राकृतिक प्रकोपका कारणले विकास खर्च कम देखिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ यस अवधिमा रू. १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख लक्ष्य राखिएकोमा फागुन १ गतेसम्म रू. २५ अर्ब ५ करोड ८२ लाख भएको छ । जुन लक्ष्यको १७ दशमलव ८६ प्रतिशतमात्र हो ।
यो खर्चमा बजेटमार्फत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने रू. २ खर्ब २५ अर्ब समावेश भएको छैन । यो रकममध्ये रू. १ खर्ब ५० अर्ब स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।
स्थानीय तहमा भएको खर्चको विवरण सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले राख्दै आएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राख्ने हिसाब र स्थानीय विकास मन्त्रालयले राख्ने हिसाब जोड्दा पूँजीगत खर्चको आकार केही बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
पछिल्ला दिनमा पूँजीगत खर्च राम्रो भएको र सरकारले राखेको वार्षिक लक्ष्य पूरा हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विकास निर्माणका ठूला आयोजनाले गति लिएको छ, धमाधम काम भइरहेको छ, लक्ष्यअनुसारको खर्चले गति लिन्छ ।’
काठमाडौं–मधेश–तराई द्रुतमार्ग आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतमबुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्गजस्ता ठूलो निर्माण आयोजनाले गति लिएकाले पूँजीगत खर्च बढ्ने देखिएको हो ।
विकास निर्माणलाई गति दिने उद्देश्यले यी आयोजनामा सरकारले प्रत्येक वर्ष प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
यस अवधिमा रू. ७ खर्ब ३० अर्बको कुल राजश्व सङ्कलनको लक्ष्यमा रू. ३ खर्ब ८५ अर्ब १७ करोड अर्थात् ५२ दशमलव ७६ प्रतिशत असुली भएको छ । रासस